DHEGEYSO-Soomaaliland oo dhaqdhaaqyo ciidan ka bilowday gobolada Sool iyo Sanaag. – Radio Daljir
Luulyo 10, 2016 3:17 b 0
(July 10 2016)-Maamulka Soomaaliland ayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwa ciidan ka bilaabay deegaamo katirsan gobolada Sanaag iyo Sool ee Puntland, si uu keeno sanaadiiqda doorashada.
Deegaamada uu hadda dhaqdhaaqyada ka bilaabay ayaa waxaa kamid ah waqooyiga gobolka Sanaag iyo bariga gobolka Sool deegaamo katirsan oo ay yimaadeen shaqsiyaad deegaanka ah oo lashaqeeya Soomaaliland.
Axmed Maxamed Cali, oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka Awrboogays ee gobolka Sool ayaa sheegay in xubno Soomaaliland kasocda u yimaadeen una sheegeen inay deegaanka keenayaan wasiiro Soomaaliland, wuxuuna sidoo kale cadeeyey in Soomaaliland ciidamo u dirtay gobolka Sanaag.
Cabdirashiid Basshiir Maxamuud ayaa waraystay